Christmas na akwụkwọ ahụ aja maka Android | Gam akporosis
Budata nke kacha mma Krismas na akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo ama ma ọ bụ mbadamba. On a pụrụ iche ụbọchị na anyị na-emekarị na-eji ezinụlọ na ndị enyi, ọ dị mma mgbe niile iji nye ahaziri aka na ngwaọrụ anyị, Ya mere, n'okpuru ị ga-ahụ a dum nhọrọ nke na akwụkwọ ahụ aja setịpụrụ maka Christmas.
Kedu ụzọ kachasị mma iji mee ememe mbubata nke Krismas karịa site n'ịgbanye ekwentị gam akporo gị! Chọpụta na ngalaba a nhọrọ kacha mma nke Krismas dị maka gam akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ekele ha, ị nwere ike ịbanye n'ime mmụọ ezumike ma nye gị smartphone ka ọ bụrụ aka.
Chọpụta ihe niile ekeresimesi maka gam akporo ị nwere ike ịchọta na gallery a n'efu na mkpebi kacha mma. Maka smartphone ma ọ bụ mbadamba. Nye gị gam akporo a Christmas aka!